Ma la basaasaa teleefankaaga? - Hoyga Aqoonta
Hoyga Aqoonta > Aqalka Aqoonta Guud > Aqoonta Guud
Ma la basaasaa teleefankaaga?
Aqoonta Guud Halkan waxaad ka helaysaa aqoon guud oo ku saabsan sida ugu sahlan ee aad golahan ugaga faa'iidaysan lahayd iyo wixii kale ee aan golaha lagu darin illaa hadda.
Waxaa la qoray : [ 18-07-2017 ]
A Salaamu Calaykum dhammaan Aqoonyahannada Hoyga Aqoonta
Ma la basaasaa teleefankaaga gacanta?
Waxaan idiin wadaa sidii aad ku ogaan lahayd in lagu basaaso iyo in kale Aqoonyahan.
Sidaad ula socotaanba aqoonyahanno, burcad kumbiyuutareed ma joogsadaan oo meel walba inay galaan bay iska jecelyihiin marka, sida la’isaga difaaco na waa mid gacanta mar walba laguu saaray. Haddaba tirooyinkan hoos ku xusan siday yihiin u geli mid walba sharraxana raac.
Arrintan iyo tirooyinkani waxay aad u khuseeyaan dadka haysta teleefanka gacanta (Smartphone ama Iphone)
Tiradani waxay kuu muujinaysaa haddii warqadahaaga iyo aqoomahaagu ama wixii coda iyo faakisba iwm inay aadaan meel kale. Yacni, teleefan kale miyay ku dhacayaan marka adiga laguu soo diro. Marka waxaad ku ogaan kartaa in howlahaas kor ku xusani teleefankaaga ku sugnaanayaan iyo in kale
Kulligeenba waan la wada soconnaa haddii qofi teleefan kuu soo diro oo uu markaa xiranyahay meel kale ayaa loo jiheeyaa taasoo ah, qolka codka lagu duubo. Mar mar kalena waxaa loo jihaynayaa qofka ku basaasaya tirade teleefankiisa. Marka tiradan kore ku qor haddii uu kuu soo baxo tirada teleefanka warqadda ee shirkadda aad teleefanka ka qaadatayi wax dhib ahi ma jiraane si nabada ku seexo
Tiradani aad iyo aad ayuu kuugu yahay muhim oo horay ka geli,wuxuuna kaa joojinayaa luuqluuqyada iyo surimmada lagaa soo geli karo. Waana qof walba oo haysta teleefanka loo yaqaan Smartphone.
Intaa wixii ka danbeeya waxaan idin leeyahay aqoonyahankii yaqaanna xeelado kale ha soo bandhigo. Mahadsanidin.
Mowduucii hore : Ma la basaasaa teleefankaaga? -||- Ka soo jeeda: -||- Qoraaga: Afrikaan
Jawaabta: Ma la basaasaa teleefankaaga?
Mahadsanid Saaxiib. Wax igu maqan ma jiraan kkkkkkk
aqoonyahanno, bay, burcad, difaaco, gacanta, galaan, geli, haddaba, hoos, iphone, jecelyihiin, joogsadaan, kumbiyuutareed, la'isaga, laguu, luuqluuqyada, raac, saaray, sharraxan, smartphone, socotaanba, teleefankaaga, tirooyinkan, xusan, yihiin
Saacaddu hadda waa 04:48 PM.